प्रसूति सेवाका लागि परोपकार प्रसूतिगृह नै अब्बल, कुन अस्पतालकाे रेकर्ड कस्तो ? – Health Post Nepal
२०७५ माघ २५ गते ९:५९
सरकारी अस्पतालको नाम सुन्दा आमसहरिया नाक खुम्च्याउँछन् । त्यसमा पनि प्रसूतिसेवाका लागि त सरकारी अस्पताल राम्रो हुन्न भन्ने सोच छ । आफैँमा ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने उपत्यका, त्यसमाथि पनि देशैभरको उपचारको गन्तव्य, प्रसूति गराउन धेरै विकल्प छन्, तर कुन संस्था उपयुक्त होला भन्ने प्रश्न आमसेवाग्राहीको मनमा खड्किरहन्छ ।
तर आमसोचविपरीत प्रसूति सेवाप्रदायक देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृह अब्बलसँगै पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको पाइएको छ । राजधानीमा सरकारी तहकै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालसँगै निजी क्षेत्रका थुपै्र अस्पताल प्रसूति सेवाका लागि नाम चलेका छन् ।
आकस्मिक तथा जटिल प्रसूति गराउनका लागि उपकरण तथा प्रविधिसँगै, न्यून बाल र मातृमृत्युदर, दक्ष तथा अनुभवी चिकित्सा जनशक्ति, सुलभ सेवा तथा पहुँच, २४सै घण्टा विशेषज्ञ जनशक्तिको उपस्थिति, सेवामा विविधता, चुस्त प्रशासनजस्ता कुराले प्रसूति सेवाकेन्द्रहरुको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ ।
बढ्दो प्रसूतिसम्बन्धी जनचेतना, नियमित गर्भपरीक्षण तथा स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूति गराउने बढ्दो परिपाटीले पछिल्लो समय बाल तथा मातृमृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । सरकारी ग्रामीण क्षेत्रमा बर्थिङ सेन्टरसँगै, कम्तीमा जिल्ला तहमा शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवासँगै अन्य केन्द्रसम्म जनशक्ति पु¥याएर सुरक्षित सुत्केरीमा जोड दिइरहेको छ । सहरवासीका थुपै विकल्प उपलब्ध भएर पनि आम रोजाइमा भने प्रसूतिगृह नै पर्ने गरेको पाइएको छ ।
करिब ६ दशक पुरानो सरकारी तहको पहिलो प्रसूतिगृह परोपकार प्रसूतिगृहले गत आर्थिक वर्षमा २० हजार ६ सय ८० डेलिभरी गराएको छ । यहाँ देशभरबाट सबैखाले बिरामी डेलिभरी सेवाका लागि आउने गर्छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार वर्षौदेखि अस्पतालमा २४ घण्टै कम्तीमा १० जना सर्जन डाक्टरको उपलब्ध हुनुले प्रसूतिगृह गुणस्तरीय प्रसूति सेवा दिन सफल भएको हो । ‘आम सेवाग्राहीको विश्वास जित्नका लागि पहिलो शर्त जतिसुकै बेला दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ’ उनले भने । प्रसूतिगृहले बिरामीको अवस्था हेरी शल्यक्रिया, बालआइसियु, आइसियुलगायत सुविधा दिँदै आएका छ । हाल ७ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रसूतिगृहमा ६० जना सर्जन चिकित्सक छन् ।
दक्ष जनशक्तियुक्त अस्पतालमा सेवा पनि निकै सुलभ छ । जनरल वार्डमा बस्न नचाहने र क्याबिन खोज्नेले पनि प्रसूतिगृहमा क्याबिनको सुविधा लिएबापत न्यूनतम ५०० देखि ३००० रूपैँयासम्म शुल्क तिनुपर्छ । अस्पतालका अनुसार प्रसूतिगृहले गत आर्थिक वर्षमा सेवा लिएकाहरुको संख्या २० हजार अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २५०० ले बढी हो ।
प्रसूतिगृहले ०६९ मा भिन्नै भवनमा टेस्टट्युब बेबी केन्द्रको स्थापना गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै निःसन्तानको समस्या भएका दम्पतीलाई प्रसूतिगृहले टेस्टट्युब बेबी सेवा दिने गरेको छ । कुल ४ सय १५ शय्यामार्फत सेवा दिइरहेको प्रसूतिगृह अत्यन्तै साँघुरो क्षेत्रफलमा सञ्चालन गर्नुपरेका समस्या हुने गरेको गौतमको भनाइ छ । अस्पतालले सुत्केरीभत्ताबापत नेपाल सरकारले दिने २ हजार रूपैयाँ पनि प्रदान गर्र्दै आएको छ । ४ पटकसम्म प्रसूतिगृहमै गर्भपरीक्षण (एन्टिनेटल) गराउनेहरूका लागि थप ८०० रूपैयाँ समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
डेलिभरीका लागि किन प्रसूतिगृह नै ?
नेपालको विशिष्टीकृत संस्था भएको र यहाँ २४ घण्टै १० जना वरिष्ठ सर्जनको उपलब्धता हुने भएकाले प्रसूति सेवामा प्रसूतिगृह नै अब्बल भएको डा. गौतम दावी गर्छ । अस्पतालमा शल्यक्रियामा उच्च क्षमता भएका ६० चिकित्सक कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रसूतिगृहमा गराइएको कुल २० हजार ६ सय ८० डेलिभरीमा जम्मा २ आमा र २६ बच्चाको मृत्यु हुनु भनेको अत्यधिक न्यून मृत्युदर हो । यो आँकडाले देशभरका प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्यसंस्थामध्ये प्रसूतिगृह नै अब्बल रहेको पुष्टि गर्छ । त्यसैले पनि प्रसूति सेवाका लागि प्रसूतिगृह नै धेरै सेवाग्राहीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । सेवाको गुणस्तरसँगै सेवाग्राहीले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने भएकाले पनि प्रसूतिगृह निम्नदेखि उच्च आयस्तरका बिरामीको आकर्षण बन्दै आएको निर्देशक गौतम बताउँछन् ।
कस्तो छ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रसूति सेवा ?
२०४२ देखि भिन्नै प्रसूति विभागको स्थापना गरेको सेवा दिँदै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पनि प्रसुतिका लागि धेरैको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । अस्पतालले दैनिक १५ देखि २० सम्म डेलिभरी गराउँदै आएको छ । अस्पतालको प्रसूति विभागमा जम्मा ३३ शय्या छन्, जसमा ७ शय्या शल्यक्रिया भएका बिरामीका लागि छुट्याइएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
प्रसूति विभागमा २ सयदेखि ६ हजार रूपैयाँसम्म शुल्कका बेड उपलब्ध छन् । अस्पतालमा समेत देशभरबाट जटिल खालका डेलिभरी केस रेफर भएर आउने गरेको छन् । बहुविशेषज्ञ अस्पताल भएकोले कुनै गम्भीर खालका जटिलता आइपरे अन्य खालका विशेषज्ञ जनशक्तिसमेत भएकोले यो अस्पताललाई समेत सुरक्षित मान्न सकिन्छ । स्वदेशबाट मात्र नभएर कतिपय डेलिभरी केस विदेशबाट समेत आउने गरेको श्रेष्ठ बताउँछिन् । अन्यत्रबाट रेफर भएर यहाँ आउने डेलिभरी केसहरूमा कार्डिक (मुटुसम्बन्धी) बिरामीको संख्या बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा धेरैजसो जटिल समस्या भएका डेलिभरी केस मात्र आउने गरेको प्रसूति विभाग नर्सिङ प्रमुख पार्वती सिवाकोटीको अनुभव छ । मधुमेह, जन्डिस, मुटुरोगजस्ता जटिल समस्या जोडिएका डेलिभरी केस देशभरबाट रेफर भएर यहाँ आउने गरेको सिवाकोटी बताउँछिन् । बिरामीको चापअनुसार बेड अभावका कारण डेलिभरीका लागि आउने बिरामीको उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षण अस्पतालले सोही अस्पतालमा नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदै आएका र अन्यत्रबाट रेफर भएका बिरामीको मात्र डेलिभरी गराउने गरेको छ । अस्पतालले २८ हप्ता नाघेका डेलिभरीका नयाँ बिरामी लिने गरेको छैन ।
नेपाल सरकारले दिने सुत्केरी भत्ता भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपलब्ध छैन । केही वर्षअघि अस्पतालले सुत्केरीभत्ता कार्यक्रम चलाएको भए पनि प्रशासनिक समस्याका कारण कार्यक्रम बन्द गराइएको सिवाकोटी बताउँछिन् । बिरामीको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै न्यून भएको अवस्थामा भने अस्पतालले निःशुल्क बेड सेवा दिने गरेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा धेरै जोखिमयुक्त केसहरू रेफर भएर आउने भएकाले गत वर्ष डेलिभरीका क्रममा ९ जना आमा र ४१ जना बच्चाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पताल प्रसूतिका लागि मात्रै विशिष्टीकृत नभएका कारण प्रसूतिसम्बन्धी आवश्यक नयाँ प्रविधियुक्त औजार तथा प्रविधि नहुनुुले समेत प्रसूति सेवा सोचेजति प्रभावकारी बनाउन नसकिएको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रसूति सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्तिको अनुपातमा बिरामीको चाप अत्यधिक हुनाले यस्तो भएको हो ।
अस्पतालले १२ असार ०७१ मा भिन्नै बर्थिङ सेन्टरको रूपमा मंगलादेवी बर्थिङ केन्द्रको स्थापना गरेर सेवा दिँदै आएको छ । उक्त केन्द्रमा कम जोखिम भएका बिरामीको डेलिभरी गराइन्छ । अस्पतालले दैनिक ४ जनासम्म बिरामीको डेलिभरी बर्थिङ केन्द्रबाट गराउने गरेको छ । बर्थिङ केन्द्रले २४ घण्टै सेवा दिने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘बर्थिङ सेन्टरमा बिरामीको संख्या न्यून हुने भएकाले त्यहाँ हेरचाह राम्रो हुन्छ । त्यहाँको सेवाबाट बिरामी बढी सन्तुष्ट हुने गरेको पाइएको छ । त्यहाँ डेलिभरीका क्रममा श्रीमान्समेत सँगै बस्न पाउने व्यवस्था छ ।’ बेड अभाव नहुने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पनि परोपकार प्रसूतिगृहसरहको डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
रेफरका केसमा बाल तथा मातृमृत्युदर बढी हुने बताउँदै श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मृत्यु हुनेमा बढी मुटुरोगी तथा दीर्घरोगी छन् ।’ क्षमताभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणसमेत बाल तथा मातृमृत्युदर बढी हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पाटन अस्पतालमा प्रसूति सेवाको अवस्था
पाटन अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा करिब ८ हजारको संख्यामा डेलिभरी गराएको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्पतालको रेकर्डअनुसार उक्त वर्षको डेलिभरीमा १ सय ३२ शिशु तथा ५ जना आमाको मृत्यु भएको छ ।
स्थापनाकालदेखि जनतालाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिनमा अस्पताल तल्लीन रहेको अस्पतालका निर्देशक विण्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
मृत्युदर कम गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डअनुसार गर्भावस्थामा चेकजाँच हुनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । अस्पतालले पछिल्लो समय अनुभवी चिकित्सकमार्फत गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको शर्माको दाबी छ । वरिष्ठ चिकित्सक पवनकुमार शर्माका अनुसार २४ घण्टै अस्पतालमा अनुभवी डाक्टरहरूको उपलब्धता रहेकाले पनि डेलिभरी सेवाको गुणस्तर वृद्धि भएको छ । पाटन अस्पताल उपत्यकामा प्रसूतिगृहपछि डेलिभरी बढी गराउने अस्पताल हो । अस्पतालले नेपाल सरकारले अस्पतालमा सुत्केरी गराएबापत प्रदान गर्ने २ हजार रूपैयाँ भत्ता सुत्केरीलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी अधिकांश डेलिभरी गराउने गरिएकाले नेपालमा बर्सेनि कतिपय आमा तथा शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाटन अस्पतालका निर्देशक शर्मा बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा ४ पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अझै पनि सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी अन्तिम अवस्था आइपरेपछि मात्र डेलिभरी गराउन अस्पताल आउने महिलाको संख्या धेरै छ । अस्पतालहरूमा क्षमताभन्दा बढी बिरामी आउनुले पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिएको शर्माको भनाइ छ ।